Ogaden News Agency (ONA) – Hawl wadeenada Jaaliyada Ogadeniya & HAAB ONLF oo si gaara ugu kulmay SA-Johanesnburg
Hawl wadeenada Jaaliyada Ogadeniya & HAAB ONLF oo si gaara ugu kulmay SA-Johanesnburg
Posted by ONA Admin	/ January 13, 2013
Hawl wadeenada jaaliyada Ogadeniya ee South Africa & madaxa Hogaanka Arimaha Abaabulka iyo Bulshada ee Jabhadda wadaniga Xoreynta Ogadeniya (ONLF) Halgame Sheekh Maxamed Cabdi Yaasiin (Diirane ) ayaa maalinimadii shalay kulan albaabadu u xidhanyahay la yeehsay maamulka jaaliyadda.
Shirkan oo ka dhacay magaalada Johannesburg ee Koonfur Africa gaar ahaan xaafada Mayfair ee ay Somalidu ku badantahay ayaa Saacado qaatay iyadoo inta badan shiishka lasarayay arimaha la xidhiidha halganka iyo isbadalada ka socda Geeska Africa.
Xubnaha kaadirka iyo gudiyada shaqada ayaa fursadan uga faa’idaystay ka dhiibashada fikradahooda ku aadan horumarinta halganka dhinaca siyaasada, ciidanka iyo arimha bulshada. Kulankan oo ahaa kulan mid noociisa ahi uuna horay uuga dhicin halkan ayaa ahaa mid siwaaafi ah loogu guulaystay ujeedooyinkiisii.
Sidookale waxaa kulankan lagu qiimeeyey hawlihii socdaalkii Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada, waxayna gudiyada xubnaha kaadirka iyo hogaankuba isla garteen inuu ahaa mid laguguulaystay iyadoo hoosta laga xariiqay dhamaan qodobadii shirka iyo sii xoojinta hawlaha jaaliyada (JOKA).
Kulankan ayaa ku soo hagaagay xili uu soo afjarmay Hawlo kormeer iyo Abaabul oo ka socday wadanka Koonfur Afrika kuwaas oo isugu jiray Abaabul & xoojinta halganka isla markaana loogu talagalay in lagu mideeyo shacabka Somalida Ogadeniya ee uu Gumeysigu haysto
Xyi Yare/South Africa – Johannesburg.